मेरो जागरण मेरो जीवन भाग - १४ - Jagaran Post
जागरणपोस्ट २४ चैत्र २०७५, आईतवार १७:५६
रसियन इन्जिनियर –
रसियन युवती र रसियन भोड्काको किस्सा कतिले सुन्नु भएको होला । कति त भुक्त भोगी नै हुनु होला । म ठूलो जहाज नचढेको बबुरोले सुनेर मजा लिनु बाहेक अरु यो पुर्पुरो नलेखेको बल गरेर नि क्यै हुने वाला थिएन । तर रसियन इन्जिनियर बाट भने कल्पना गरे भन्दा साह्रै तीतो अनुभूति छ। सबैमा लागू नहोला । रसियामा नै पढेका उदाहरणीय व्यक्तित्व पनि प्रसस्तै छ्न ।
मैले जागीर खाँदा एक उच्च घरानिया तर आफ्नै सगोत्रीया इन्जिनियर मेरा हाकिम थिए । (नाम थर उल्लेख गर्न चाहिन ) हुन त मलाई ज्यालादारीमा जागिर लाइदिएको पनि उनैले हो । उनको अधिकार क्षेत्र नै त्यत्ति थियो । स्थायीको लागि बाटो पनि उनैले खोलिदिए भनम् । ज्यालादारी खाइरहँदा विज्ञापन खुल्यो आन्तरिक बाटै आयोगमा पनि छनौट भैयो । मेरो दाजु (माइलो बुबाको छोरा बिष्णु प्र आचार्य ) उहाँ सँग नजिक भएको कारणले नै मैले सहजै जागिरमा प्रवेश पाएको हुँ । जागीरमा प्रवेश पाए पश्चात दाजु सँग झिना मसिना कुरामा कैल्यै गुनासा राखिन । आफू भन्दा माथीकाले जति पेले पनि । दैनिक १४ घण्टा सम्म काम पनि गरियो । अरुले २ घन्टा बढी काम गर्दा नि ओभर टाइम पाउँथे , आफू भने चिल्लाराम । यसरी बडो कष्ट सित करिब नौ महिना कटाएँ ।पछि दरवन्दीमा नियुक्त भए पछि भने नियमानुसार सबै सेवा सुबिधा बल्ल पाइयो ।
हत्तेरी ! यी बेकारका गन्थन कति गर्नु , म हजुरलाई सोझै बिषयमा प्रवेश गराउँछु । हजुर ! उहाँ (हाकिम साहेब)का उनानसय गुन थिए बैगुन थियो त उही रसियामा लागेको बानी । ठूलो खानदानको भएकोले उहाँलाई आर्थिक भार हुने कुरै भएन । श्रीमती पनि अधिवक्ता । हाकिमको जागीरले उहाँलाई पुग्दैन्थ्यो । पाहुना पनि प्रायः क्वाटरमा टुट्दैन्थे । काठमाडौ कै स्थानीय भएकोले , नातेदार साथी पोखरा घुम्न आउँदा उहाँकै क्वाटरमा अखडा जमाउँथे । खर्चपर्च घरबाट पनि ल्याउनु हुन्थ्यो त्यस्तै प्रसंग चल्दा उहाँ र म्याडम कै मुख बाट सुनेको हुँ । उहाँ पोखरा बसुन्जेल कुनै दिन पनि कत्ति नखाएको बेला भेट्न मुस्किलै थियो । अफिस टाइम मै पनि बेला बेलामा क्वाटरमा गएर क्वाटर लडाइ हाल्नु हुन्थ्यो । सँगै रक्सी खाने भाग्यमानी साथीहरू सँग त उहाँको राम्रै सम्बन्ध थियो । तर म बबुरोलाई बर्षमा एक दुई दिन बाहेक त्यस्तो अवसर जुर्दैन्थ्यो । त्यो बेला घरको सबै जिम्मेवारी मेरै थाप्लोमा थियो । संयोग पनि कस्तो पर्‍यो भने मेरो सहोदर दाजु त्यही बेला रसियमा नै इन्जिनियरिङ्ग गर्दै हुनु हुन्थ्यो । त्यो कुरा उहाँ हाकिम साहेबलाई जानकारी थियो । दाइले चिट्ठी पठाए पिच्छे फोटो हरु पठाउनु हुन्थ्यो । चिट्ठी अफिस मै आउने भएको हुँदा कति पटक खै तिम्रो दाइको चिट्ठी फोटो हेरौं भनेर उत्सुकता पुर्वक हेर्नु हुन्थ्यो अनि बृफिङ्ग गर्नु हुन्थ्यो पनि । मस्को , तास्कान्त , एरेभान यस्तै यस्तै ठाउँ हरुको बारेमा र अनि त्यहाँ गरेका मोज मस्तीका बारेमा पनि । मलाई कता कता चिसो पस्थ्यो कता मेरो दाइ पनि यस्तै इन्जिनियर हुने त हैन । तर ती हाकिम र मेरो दाइको परिवेश आकाश जमिन फरक थियो ।
पञ्चायतकालको अवस्था सि डि यो /अञ्चलाधीश कार्यालय बाट निगरानी भै रहन्थ्यो । जब माथी बाट दवाब आउँथ्यो त्यस्को रीस निर्ममता पुर्वक हामी माथी फेर्थे । अनावश्यक रुपमा स्पष्टीकरण लिने, गयल गर्ने गर्नु विधि गरे । सानो तिनो मानवीय गल्ती हुँदा पनि एक्सन लिइ हाल्ने । एक दिन कपिल रञ्जित दाजु र म नाइट ड्युटीमा थियौं । पुरानो एक्सचेन्ज भएकोले बराबर प्राविधिक समस्या आइरहन्थ्यो । जो हामी जानकार थियौं आफैं समाधान गर्थ्यौं पनि । त्यो बेला सामान्य कर्मचारीको घर सर्भिस फोनलाईन पनि थिएन । त्यो दिन करिब साढे आठ बजेको हुँदो हो एक्कसी एक्सचेन्जको पछाडि बाट आगो लाग्यो । पावर सर्किट सर्ट भयो कि ओभर लोड भयो । हाकिमलाई खबर गरें र थप क्षति नहोस् भनी पुरै एक्सचेन्ज सट डाउन गरिदिएँ । सिडियो र अञ्चलाधीशले अति गोप्य सूचना रातीमा मात्र माथी जाहेर गर्थे । एक्कासी टेलिफोन बन्द भए पछि । जिल्ला प्रहरी प्रमुख , सहायक अञ्चलाधीश सहित , सिडियो कार्यालय कर्मचारी हाकिम नआउँदै एक्सचेन्जमा आइपुगे र यथार्थ जानकारी दियौं । हाकिमलाई बोलाई सकेको जानकारी पनि दिएँ । एक छिन पछि सहयोगी सहित हाकिम पनि आइपुगे तर उनको अवस्था ठिक थिएन । फिटान थिए । अरु अधिकारी नचिने पनि सहायक अञ्चलाधीश सित मेरो चिनजान थियो । हाकिमको डरले हो कि धपेडी गरेर आएकोले हो चिटचिट पसिना निधारमा स्पष्टै देखिन्थ्यो । हाकिम नआउँदै मैले स. अञ्चलाधीशलाई एक्सचेन्जको जिर्ण अवस्था बारे अवगत गराइ सकेको थिएँ । त्यसैले मलाई त्यस्तो खारखेर पारेनन् । तर हाकिम आइ सके पछि भने उनको सातो खाए । कुनै हालतमा भए पनि अहिल्यै चलाउनू भनेर । बिचरा हाकिमलाई हामीलाई जति पनि आइडिया पनि थिएन । एक छिन पछि अधिकारी हरू फर्कीसकेका थिए । हाकिमको पनि नसा आधाआधी उत्रिसकेको थियो । केही बेर पछि पावर टेक्निसियन पनि आए । पावर टेक्निसियन आए पछि जेनतेन गरेर साढे दस बजे तिर एक्सचेन्ज चलाइयो पनि । त्यो दिन देखि भने मलाई निकै माया गर्न थाले त्यसरी सानो तिनो निहुँमा खप्की खान परेन । केही दिन पछि सरुवा पनि भए । क्षेत्रीय निर्देशक सम्म त्यसै गरि पड्काए पनि । बीच बीचमा पोखरा आउँदा राम्रै सौहार्दता रहि रह्यो । अन्तिम पटक भेट्दा हात खुट्टा मुरली जत्रा भै सकेका थिए । अरु शालीनता भने साबिकै थियो । अन्तिम भेट्मा मेरो कार्यकक्ष मै धेरै बेर बसे पनि । उनैले चिया ख्वाए । बिगत सम्झेर अब भेट होला नहोला । जानअन्जानमा तिमी हरुको चित्त दुखाएको भए सबै भूल है मेरो भाइ । भनी बिदा भएको केही महिनामा मै दु:खद खबर सुनियो ।
पढ्नुहोस – मेरो जागरण मेरो जीवन भाग १३